Mamonjy amin'ny faran'ny herinandro ve ny USPS? Jereo ny karazana tolotra fanaterana atolotra
By Victoria Akpan TMLT Septambra 20, 2021 Business 0 Comments
- Mamonjy amin'ny faran'ny herinandro ve i USPS -
Ny fandefasana parcels amin'ny alàlan'ny serivisy paositra dia safidy mety foana, mitaky ny filana laharam-pahamehana ny fandaharam-potoana fandefasana mba hahamora ny mpanjifa. Ary raha mampiasa USPS ianao dia tianao haterina amin'ny faran'ny herinandro.
Na izany aza, mametraka fanontaniana lehibe io: tsia USPS manatitra amin'ny alahady, sabotsy, na faran'ny herinandro?
Inona no hatao raha tsy mahazo ny kaomandanao Amazon ianao
Paositra sy habe amin'ny paositra
Serivisy mandrakizay sy serivisy ho an'ny mailaka
Inona no atao hoe USPS?
Alohan'ny hamaliana ny fanontaniana: Manome amin'ny faran'ny herinandro ve ny USPS? aza hadino fa. USPS dia fanafohezana.
Midika ho an'ny Serivisy paositra any Etazonia izany. Ary koa, ny USPS araka ny fantatry ny besinimaro dia efa teo hatrany hanomezana tolotra tsara indrindra ho an'ny teratany amerikanina rehetra ary hanamora kokoa ny fiainany.
Sampan-draharahan'ny paositra amerikana (USPS) dia maso ivoho fanta-daza amin'ny governemanta federaly amerikana. Izy io dia miandraikitra ny fanomezana serivisy paositra manerana an'i Etazonia, ao anatin'izany ireo fanjakana mifandraika amin'izany sy ireo faritra manodidina azy.
Ary koa, ny United States Postal Service, na USPS, dia serivisy fandefasana entana malaza izay manome vahaolana isan-karazany amin'ny fandefasana manerana an'i Etazonia sy ireo fanjakana mifandraika amin'izany.
Ankoatr'izay dia maso ivoho mahaleo tena fantatry ny governemanta federaly amerikana miandraikitra izany manome tolotra paositra tsara kokoa manerana ny firenena.
Miaraka amin'ny serivisy isan-karazany sy ny fahafantarana fa USPS koa dia manolotra fonosana amin'ny faran'ny herinandro, USPS dia nitombo tamin'ny lazany sy ny tanjaky ny mpankafy eo amin'ny malaza orinasa eCommerce.
Azo zahana ny serivisy na aiza na aiza toerana misy azy. Manolotra fandefasana ara-potoana ihany koa izy ireo amin'ny vidiny mirary sy serivisy avo lenta manintona ny mpanjifa.
Mamonjy amin'ny faran'ny herinandro ve ny USPS?
Rehefa manatona serivisy mpandefa iraka toa an'i USPS isika, iray amin'ireo fanontaniana voalohany tonga ao an-tsaina ny hoe manatitra amin'ny faran'ny herinandro ve izy ireo.
Ny alahady indray dia tsy misy resaka intsony satria heverina ho andro fitsaharana izy ireo. Na izany aza, ny USPS dia mamonjy amin'ny faran'ny herinandro.
Karazana serivisy fanaterana natolotry ny USPS
Fantatsika rehetra fa ny USPS dia manolotra amin'ny faran'ny herinandro, fa ny USPS koa dia manome ireto tolotra mailaka sy fandefasana entana manaraka ireto:
Fonosana na paositra
Ny mailaka laharam-pahamehana $$ 1 - 3 andro Packages
Priority Mail Express $$$ Ny alina na 1 - 2 andro Packages
Media Mail $ 2 - 8 andro Packages
USPS Retail Ground $ 2 - 8 andro Packages
Mail voalohany $ 1 - 3 andro Mail
1. Mail laharam-pahamehana
Ny fotoana fandefasana dia manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 andro miankina amin'ny fonosana, ny fiaviany ary ny toerana alehany.
Taham-pisidinana mailaka laharam-pahamehana manala ny filanjana milanja fonosana milanja hatramin'ny 70 lbs. Manomboka amin'ny $ 7.35 ny vidiny ary azo jerena amin'ny Internet na amin'ny toerana rehetra misy ny Paositra.
Ary koa, Priority Mail no safidy tsara indrindra raha mavesatra kokoa ny fonosanao na ny mailakao mihoatra ny 13 ounce ary ilainao haingana sy amin'ny vidiny mirary izany.
Ny fandefasana dia maharitra 1-3 andro.
Maimaimpoana ny fakana fonosana ary ampidirina ny fanarahan-dia USPS.
Ahitana fiantohana $ 50 farafahakeliny.
Tsy misy fiakaran'ny vidin-tsolika.
Ny fanaterana ny sabotsy dia fenitra.
Mailaka laharam-pahamehana: Saran'ny fisaka
12 ½ x 9 ½ santimetatra 6.95 $ ho an'ny tobim-barotra ao amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.35 Taratasy fanoratana sora-tanana
Valopy misy valiny fisaka Window
12 ½ x 9 ½ santimetatra 6.95 $ ho an'ny tobim-barotra ao amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.35 Valopy efa voaresaka
Valopy fisaka ho an'ny karatra fanomezana
10 x 7 santimetatra 6.95 $ ho an'ny tobim-barotra ao amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.35 Karatra fanomezana Karatra fiarahabana izay be loatra
Valopy kely fisaka kely
10 x 6 santimetatra 6.95 $ ho an'ny tobim-barotra ao amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.35 Pasipaoro taratasy kely
Valopy fisaka ara-dalàna
15 x 9 ½ santimetatra 7.25 $ ho an'ny tobim-barotra ao amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.65 Antontan-taratasy ara-dalàna
Valopy misy valiny fisaka padded
12 ½ x 9 ½ santimetatra Paositra: $ 8 (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.55 ny fototra ara-barotra. Boky firavaka mitafy firavaka
Vata kely fisaka
Ao anatiny: 8 5/8 x 5 3/8 x 1 5/8 santimetatra
Any ivelany: 8 11/16 x 5 7/16 x 1 ¾ santimetatra $ 7.50 ho an'ny tobim-barotra ao amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 7.90 Brochure elektronika kely
Boaty takelaka fisaka lehibe
Ao anatiny: 12 x 12 x 5 ½ santimetatra
Etsy ivelany: 12 ¼ x 12 ¼ x 6 santimetatra Ao amin'ny Post Office, $ 19.95 (an-tserasera sy an-tsena) $ 17.60 ny fototra ara-barotra. Fanomezana lehibe, solosaina, solosaina finday sns.
Boaty tahan'ny salantsalany antonony - karazana 1 (fisondrotana ambony)
Ao anatiny: 11 x 8 ½ x 5 ½ santimetatra
Etsy ivelany: 11 ¼ x 8 3/4 x 6 santimetatra Paositra: $ 14.35 (an-tserasera sy antsinjarany) $ 12.8 ny fototra ara-barotra. Kirisiteran'ny kiraro
Boaty tahan'ny salantsalany antonony - karazana 2 (fanatrarana sisiny)
Ao anatiny: 13 5/8 x 11 7/8 x 3 3/8 santimetatra
Etsy ivelany: 14 x 12 x 3 ½ santimetatra $ 14.35 amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 12.8 ho an'ny tobim-barotra Kirisiteran'ny kiraro
Boaty lalao fisaka lehibe fisaka
Ao anatiny: 23 11/16 x 11 ¾ x 3 santimetatra ivelany: 24 1/16 x 11 7/8 x 3 1/8 santimetatra Ao amin'ny Post Office, $ 19.95 (an-tserasera sy an-tsena) $ 17.60 ny fototra ara-barotra. Lalao lalao
Ny lanjan'ilay fonosan'entana dia tokony ho 70 lbs.
Ny girth sy ny halavany mitambatra dia tsy tokony hihoatra ny 108 santimetatra.
Rehefa famehezana boaty na valopy fisaka, ny saron'ireo kaontenera dia tokony hanidy ny valizy mahazatra.
2. Priority Mail Express
Miaraka vitsivitsy maningana, ity dia iray amin'ireo serivisy an-trano haingana indrindra natolotry ny US Postal Service. Misy 365 andro isan-taona izy io ary misy antoka azo antoka.
Ary koa, mandefa any amin'ny adiresy rehetra any Etazonia, ao anatin'izany ny PO Boxes. Manomboka amin'ny $ 25.5 ny vidiny ary azo jerena amin'ny toerana rehetra misy ny Paositra sy amin'ny Internet. Ny safidy Flat Rate dia manafoana ny filàna milanja fonosana milanja hatramin'ny 70 lbs.
Priority Mail Express no safidy tsara indrindra raha mila haingana ny fonosanao ianao (indray alina) ary aza mampaninona anao ny mandoa premium.
Ny fonosana dia alaina maimaimpoana - na any amin'ny birao na any an-tranonao.
Ahitana sonia nomerika ho an'ny firaketana ary koa ny fanarahana ny USPS.
Manana politika fiantohana $ 100.
Amin'ny fialantsasatra sy alahady, ny fandefasana mandritra ny alina dia misy sarany fanampiny.
Priority Mail Express: Saran'ny fisaka
Valopy fisaka ara-dalàna 15 x 9 ½ santimetatra $ 25.7 amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 22.80 ho an'ny tobim-barotra Antontan-taratasy ara-dalàna
Valopy fisaka 12 ½ x 9 ½ santimetatra $ 25.5 amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 22.68 ho an'ny tobim-barotra Document Manuscripts
Valopy misy valiny fisaka padded 12 ½ x 9 ½ santimetatra $ 26.2 amin'ny Post Office (an-tserasera sy antsinjarany) $ 23.18 ho an'ny tobim-barotra Boky fitafiana firavaka mitafy
3. Mail voalohany
Ny mailaka kilasy voalohany dia iray amin'ireo serivisy mailaka USPS lafo indrindra. Izy io dia fomba mahomby sy mahomby amin'ny fandefasana fonosana kely sy valopy.
Ary koa, Tombo-kase Voalohany Kilasy Mandrakizay, etsy ankilany, dia lafo amin'ny 1 oz amin'izao fotoana izao. Na izany aza, tsy lany andro izy ireo na dia miakatra aza ny vidiny.
Raha milanja 13 grama na latsaka ny fonosanao na ny mailanao ary tsy mila anateranao azy io mandritra ny alina, ny First Class Mail no safidy tsara indrindra.
Mety ho an'ny:
Valopy tokana misy habe tokana milanja hatramin'ny 3.5 oz.
Fonosana kely milanja hatramin'ny 13 oz.
Hanatitra ny fonosana ao anatin'ny telo andro fiasana. Manomboka amin'ny $ 0.55 ny vidiny.
Tsy misy fiatraikany amin'ny taha ny lavitra.
Tsy misy ny fandefasana entana any an-trano na ny vidin'ny solika.
Ho an'ny fonosana kely dia safidy haingana sy mora ity.
Navoaka tao anatin'ny 1-3 andro fiasana
$ 5000 amin'ny fiantohana fiantohana (entana ihany)
13 oz. faratampony
Ho an'ny karatra sy taratasy, maimaim-poana ny lanjan'ny fonosana hatramin'ny 3.5 grama.
Ny tombo-kase mahazatra dia manomboka amin'ny $ 0.35 ho an'ny karatra paody mahitsizoro.
Takelaka taratasy no takiana amin'ny karatra paositra lehibe. Manomboka amin'ny vidiny 0.55 $ izy ireo.
Ny tombo-kase mahazatra dia manomboka amin'ny $ 0.55 ho an'ny valopy mahitsizoro.
Ny hajia valopy misy endrika tsy mahazatra, toy ny kianja lehibe, dia manomboka amin'ny $ 0.70.
Ny litera mailaka kilasy voalohany dia tsy tokony mihoatra ny 3.5 oz.
Ny fonosana sy valopy lehibe misy ny kilasy voalohany dia tsy tokony mihoatra ny 13 Oz.
Ny valopy sy karatra paositry ny paositra rehetra dia tsy maintsy manana endrika mahitsizoro. Raha tsy izany dia mety hapetraka ny sarany fanampiny.
4. Media Mail
Tsy misy izany raha tsy ho an'ny horonan-tsary, boky, rakipeo ary CD. Na izany aza, misy fetra vitsivitsy amin'ny Media Mail. Ilay entana dia azo apetraka ao anaty valopy tsara sy matevina, fa tsy ao anaty valopy tsotra sy tsotra miaraka amina padding fanampiny.
Ny boky dia tsy azo totofana ao anaty valopy manila. Raha boaty no ampiasainao, dia boky tsy misy padding fanampiny no tokony ao anatiny.
Tsy mahazo mandefa zavatra misy dokam-barotra eo ianao (ohatra: magazine sy gazety). Ny fonosana Media Mail rehetra dia azo zahana.
Midika izany fa ny USPS dia manana fahefana feno hanokatra sy hijery azy ireo. Raha mandefa magazine na gazety amin'ny alàlan'ny Media Mail ianao, dia haverina miaraka amin'ny fampandrenesana Postage.
Media Mail dia safidy mora vidy amin'ny fitaovana fanabeazana, saingy mety hiadana noho ny politikan'ny "Space Available" an'ny USPS.
Midika izany fa ny karazana mailaka hafa rehetra dia ampitaina aloha, ary ny Media Mails dia avela raha tsy misy toerana. Raha tsy ampy ny efitrano dia tsy maintsy miandry ny fonosana.
Ny Media Mail dia mety amin'ny fandefasana fitaovam-panabeazana toy ny boky sy DVD amin'ny vidiny ambany amin'ny fandefasana miadana. Ny paositra dia mitaky vidiny $ 2.75.
Ny safidy mora indrindra indrindra amin'ny entana milanja mihoatra ny 13 ounce.
Ary koa, ny lanjan'ny entana farany ambony dia 70 lbs.
Ny lanjany dia mamaritra ny lanjany fa tsy ny halavirana.
Navoaka tao anatin'ny 2-8 andro fiasana
Inona no azonao andefasana amin'ny Media Mail?
Fitaovana fanandramana sy mozika pirinty
Tabila fanabeazana izay natao pirinty
Haino aman-jery azo vakiana amin'ny solosaina
Raki-peo sy rakipeo
Boky fampianarana (pejy 8 farafahakeliny)
Pejy sy fatorana ravin-ravina fitsaboana
Fandefasana solosaina, kapila nomerika ary lalao video dia tsy mendrika amin'ny Media Mail.
5. USPS Retail Ground
Safidy fandefasana tany mahomby sy azo ianteherana ho an'ny fonosana be loatra io. Tombony raha toa ka tsy mila fanaterana eo noho eo ny fonosanao. Azo ampiasaina amin'ny fandefasana entana milanja tsy mihoatra ny 70 pounds.
Raha tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny Priority Mail ny fonosana ary "be loatra" dia diniho ny kilasy mailaka any amin'ny Retail Ground.
Ny fonosana dia mety milanja hatramin'ny 70 pounds ary mahatratra hatramin'ny 130 santimetatra ny lavany sy ny sakany.
Ny fanarahana ny USPS dia omena maimaimpoana.
Mila 2-8 andro fiasana vao hatolotra.
Ao amin'ny paositra USPS ihany no misy.
Fonosana tena tsara izay heverina ho lehibe loatra amin'ny fanaterana Priority Mail sy Priority Mail Express.
Tsy misy afa-tsy amin'ny fandefasana entana milanja hatramin'ny 70 pounds ary mahatratra hatramin'ny 130 santimetatra (mitambatra ny halavany sy ny vodiny).
Ny vidiny mihoapampana dia mihatra amin'ny fonosana maivana sy maivana.
Mamonjy amin'ny alahady ve ny USPS?
Ie. Ny USPS dia manatitra isaky ny Alahady, fa mazàna ny fonosana Priorities Mail sy Amazon Packages ihany. Saika tsy azo ihodivirana ny fandefasana alahady mba hahafahana mamaly ny fitaky ny mpanjifa mitombo.
Ohatrinona ny vidin'ny fanaterana amin'ny asabotsy sy alahady?
Raha mijery ny vidiny ianao dia ho hitanao izany Fanaterana sabotsy sy alahady tsy mihoatra. Izany dia vokatry ny fisian'ireo serivisy ireo miaraka amin'ny serivisy USPS.
Ny vidiny, toy ny serivisy fandefasana entana hafa rehetra, dia miankina tanteraka amin'ny anton-javatra toy ny halaviran'ny dia lavitra, ny serivisy fandefasana voafantina, ny lanjany sy ny refin'ny fonosana, sns. Ity no azonao antenaina handoavana ny fandefasana amin'ny sabotsy sy alahady.
Mail alohan'ny laharam-pahamehana - Manomboka amin'ny $ 6.40 ny vidiny; fandefasana tahan'ny fisaka hatramin'ny 70 lbs; fandefasana maimaim-poana Alatsinainy ka hatramin'ny Sabotsy; ny fandefasana maharitra 1-3 andro fiasana.
Priority Mail Express - Manomboka amin'ny $ 22.95 ny vidiny; fandefasana tahan'ny fisaka hatramin'ny 70 lbs; fandefasana maimaim-poana mandritra ny taona; ny fanaterana dia antenaina ao anatin'ny 1-2 andro fiasana
Inona ny ora fanaterana USPS amin'ny asabotsy?
Ny ora fandefasana ny USPS amin'ny asabotsy dia faritan'ny anton-javatra maromaro, ao anatin'izany:
Ny habetsaky ny mailaka voaray
Ary koa, ny halavirana avy amin'ny trano fitehirizana mankany amin'ny toerana farany.
Tsy misy mahasamihafa ny asabotsy sy ny andro hafa ho an'ny mpitatitra taratasy. Ny mpitatitra taratasy dia tsy mahafoy an-tsitrapo ny lalany. Tsy maintsy manefa ny adidiny rehetra izy ireo.
Raha ambany ny isan'ireo mailaka halefa, dia mety ho tonga aloha kokoa noho ny nandrasana izy ireo. Na izany aza, raha manana mailaka marobe izy ireo dia mety hitatra ny fotoana fandefasana USPS.
Ora fanaterana USPS amin'ny asabotsy sy alahady
Mety manontany tena ianao ny amin'ny ora fandefasana azy izao satria fantatrao fa manatitra i USPS amin'ny faran'ny herinandro. Ny fotoana fandefasana ny fandefasana anao amin'ny asabotsy dia miankina tanteraka amin'ny serivisy mailaka nofidinao ary koa ny toerana misy anao.
Tsy maintsy misafidy ianao Priority Mail Express na Mai laharam-pahamehanal raha tianao ho tonga ny fonosana amin'ny asabotsy. Amin'ny ankapobeny, ny ora fandefasana USPS faran'ny herinandro dia tapa-kevitra ny paositra any an-toerana.
Na eo aza ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny paositra dia nametraka ora fiasana ora maro, ny mpanjifa dia afaka mampiasa ny kioska amin'ny fotoana rehetra. Vokatr'izany, ny ankamaroan'ny fanaterana ny sabotsy dia voafaritry ny toerana misy anao ary, indray mandeha, ny ora fiasan'ny paositra any an-toerana.
Na izany aza, azonao atao ny maminavina ny fandefasana ny ampitso maraina.
Misy ny fandefasana alahady, saingy voafetra ihany, toy ny fandefasana amin'ny asabotsy. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny fonosana Priority Mail Express sy Amazon ihany no hatolotra.
Ary koa, ny fotoana fandefasana dia miankina tanteraka amin'ny fotoanan'ny paositra any an-toerana. Ohatra, ny USPS dia manatitra eo anelanelan'ny 9 maraina ka hatramin'ny 1 ora hariva any Aurora, Colorado, fa ny USPS kosa manatitra eo anelanelan'ny 11 maraina ka hatramin'ny 3 hariva any amin'ny faritra hafa any Colorado.
Serivisy fandefasana USPS- Daty sy daty fanaterana antenaina
Ity latabatra ity dia hanome anao fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny serivisy USPS sy ny andro fandefasana, ao anatin'izany raha toa ka manome USPS amin'ny faran'ny herinandro, fiampangana sns.
Mail alohan'ny laharam-pahamehana
USPS Retail Ground (Paositra mahazatra)
1-2 andro fiasana miaraka amin'ny antoka azo antoka 1-3 andro fiasana, fa tsy antoka 1-3 andro fiasana, fa tsy azo antoka 2-8 andro fiasana, fa tsy azo antoka 2-8 andro fiasana, fa tsy azo antoka
Andro fandefasana USPS
365 andro isan-taona, tafiditra ao ny fanaterana Sat sy Sun Alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy (afa-tsy ny fialantsasatra) Tsy voasoritra Tsy voasoritra Tsy voasoritra
Manomboka $22.95 amin'ny toerana misy ny paositra na amin'ny Internet any amin'ny fanjakana rehetra; fisaka hatreto 70 lbs Manomboka $6.45 amin'ny toerana misy ny paositra na amin'ny Internet; fisaka hatreto 70 lbs Ny vidiny dia miankina amin'ny haben'ny mailaka / fonosana, ny lanjany ary ny endriny Manomboka $6.75 any amin'ny paositra Manomboka $2.72 any amin'ny paositra
-Ny $100 fiantohana
-fampidirina ny firaketana ny sonia fanaterana porofo sy ny mombamomba ny fanarahana
-Fandefasana alina, izay mahatratra ny ampitso amin'ny 10:30 maraina, misy ny fialantsasatra amin'ny fialantsasatra sy ny alahady
-mba misy ny fanarahan-dia USPS ho an'ny fandefasana antsinjarany na an-tserasera
miaraka amin'ny fiantohana $ 50
-tsy misy sarany fandefasana solika, na fanaterana any ambanivohitra, fonenana ary fanaterana sabotsy mahazatra
-serivisy lafo vidy ho an'ny 13 oz namany Sary
-$5,000 entana dia saron'ny fiantohana. Azo ampiarahina amin'ny serivisy hafa ho fanamafisana ny fandefasana izany
-ny safidy tsara indrindra ho an'ny orinasa
-tsy misy amin'ny antsinjarany fotsiny
-fisafidianana fonosana lehibe kokoa izay tsy zakan'ny Priority Mail Express sy Priority Mail
-miaraka USPS ampy
-amin'ny fanarahan-dia USPS
-fomba mahomby amin'ny fandefasana fitaovana fanabeazana toy ny boky
-70lbs lanja mavesatra
-faoka valopy fisaka fisaka misy valiny mahazatra ~ -Ny lanjany farany ambany ihany 13 oz
- Ny valopy sy karatra paositra dia tokony ho efa-joro. Na izany aza, mety ampiana fiampangana fanampiny
dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fandefasana entana izay milanja hatramin'ny 70 lbs ary 130 santimetatra (mifangaro ny halavany sy ny sisiny)
-Misy vidiny manokana ho an'ny fonosana lehibe sy maivana
-Ny lanjany farany ambany dia amin'ny 70 lbs
-Misy fameperana ny karazana haino aman-jery azo alefa satria tsy misy afa-tsy fitaovam-pampianarana ihany (lalao video, kapila nomerika, kapila solosaina dia tsy mendrika alefa amin'ny vidin'ny Media Mail).
Azonao atao ve ny maka fonosana USPS amin'ny asabotsy sy alahady?
Afaka mifidy amin'ny serivisy isan-karazany omen'ny USPS ny mpanjifa. Raha mandefa ny USPS amin'ny faran'ny herinandro, dia manolotra safidy fakana fonosana ho an'ireo izay manana antony marim-pototra hanaovana izany.
Afaka maka fonosana avy amin'ny Biraon'ny USPS raha manana ny mombamomba anao ianao ary faningana vitsivitsy, toy ny hoe tianao ho tonga haingana ilay fonosana na raha nangataka fangatahana fihazonana amina USPS ianao.
Zava-misy momba ny fonosana USPS Pick Up
Satria andraikitry ny USPS ny mandefa fonosana sy mandefa mailaka ara-potoana any amin'izay tanjony, misy fotoana mety irian'ny mpanjifa azy ireo alohan'ny daty na ora voatondro handefasana azy.
Raha manana ny laharana fanarahana sy ireto maningana ireto ianao dia azonao atao ny mandray ilay fonosana avy any USPS.
1. Maika ny filana
Afaka mifandray amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa USPS ianao raha sendra toe-javatra maika tsy azo odian-tsy hita (ohatra, hiala ao an-tanàna ianao) ary mila mailaka na fonosana haingana araka izay tratra.
Ny mpanjifa dia afaka mandray ny fonosany na mailaka amin'ny tranga sasany, raha tsy ara-dalàna ny antony. Mety maharitra andro maromaro vao ho tonga ao an-tranonao ireo mpitatitra.
Aleo nofoanana noho izany ny fanafoanana ny fanaterana any an-trano ary alao ny fonosana ao amin'ny paositra amin'ny fotoana toy izany.
2. USPS tsy hita
Raha nisafidy ny fandefasana trano ianao dia azo inoana fa hangataka sonia ianao rehefa tonga ilay fonosana. Raha tsy izany dia azonao atao ny manatitra ny fonosanao rehefa tsy eo ianao.
Na izany aza, ny zazalahy mandefa na ny paositra dia hangataka fahazoan-dàlana amin'ny mpandray, izay efa nosoniavinao, na angamba alalana avy amin'ny birao amin'ny tranga sasany.
Raha tsy mifanaraka amin'ny iray amin'ireo scenario roa voalohany ny toe-javatra dia mety averin'ilay mpitatitra ny fonosanao na avelany any amin'ny paositra akaiky indrindra.
Mety avelan'izy ireo haka ilay fonosana ianao amin'izay raha mitondra ny slip-nao sy kara-panondro na kara-panondro mety noho ny antony ara-piarovana.
3. Mihazona ny fangatahana
Ny programa USPS Package Intercept dia manana endrika antsoina hoe Hold upon Request izay natao manokana ho an'ireo olona te-handray ny fonosany amin'ny lalana mifanohitra amin'izany.
Midika izany fa ianao no mpandefa, ary very ny fonosanao, na ny entanao mbola tsy navotsotra na natolotra, ary tadiavinao hiverina izany.
Tokony hangataka an'ity karazana amenity ity ianao miaraka amin'ny adiresy mpandefa amin'ny fotoana toy izany. Misy ihany anefa ny sarany aloa. Ataovy ao an-tsaina hatrany fa tsy azo averina io sarany io.
Torohevitra momba ny fonosana USPS
Ka ahoana ny amin'ny fisorohana olana sasany amin'ny fandefasana anao? Eny, mety ho afaka hamonjy anao amin'ny aretin'andoha marary voalaza etsy ambony io.
Ireo, mazava ho azy, dia tsy azo sorohina, indrindra rehefa maika. Na izany aza, raha manana mpanjifa misy poizina ianao dia ireto misy sosokevitra vitsivitsy hisorohana anao tsy hanana olana amin'ny mailaka.
Azonao atao ny maka fandaharam-potoana fakana entana, ento any amin'ny paositra ny mailanao, avelao ao amin'ny boaty mailakao, na alefa ao anaty boaty fanangonana manga.
Raha mavesatra mihoatra ny 13 grama ny entanao, ento any amin'ny latabatra fivarotana biraon'ny Paositra. Hamarino tsara fa efa misy ny hajia paositra.
Mba handaminana fotoana fakana entana dia atombohy amin'ny fandefasana ny fangatahanao an-tserasera sy ny fanomanana ny entanao alohan'ny hahatongavan'ilay mpitatitra.
Fenoy ny takelaka Hold Mail avy amin'ny paositra alohan'ny hametrahana ny mailanao. Aza adino ny mitsidika ny USPS amin'ny Internet na miantso ny serivisy ho an'ny mpanjifa raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitazonana ny entanao mandritra ny 30 andro amin'ny alàlan'ny paositra. Azonao atao ny mandray ny mailakao amin'ny paositra na alefa any an-tranonao.
Torohevitra misimisy momba ny fonosana USPS
Tadidio ny havaozy ny adiresy fandefasana anao isaky ny mandeha mivoaka hamindra trano ianao raha mandehandeha foana.
Raha ny fanontana ny hajia postage dia afaka manao izany haingana sy mora amin'ny Internet ianao, manala ny filana mankany amin'ny paositra.
Ny sonia ataonao dia manan-danja mitovy amin'ny taratasinao. Ny sonianao dia manaiky ny fahazoana ireo entana. Tadidio fa rehefa manao izany ianao dia manafaka anao amin'ny andraikitra ny serivisy paositra. Noho ny antony fiarovana dia tokony hamafiso ny mombamomba ny mpandefa, toy ny anarana sy ny adiresy, rehefa azonao izany.
Manantena izahay fa tianao ity lahatsoratra ity amin'ny USPS Deliver amin'ny faran'ny herinandro ary tena nanampy anao izany ary afaka namaly ny fanontanianao raha USPS Deliver amin'ny faran'ny herinandro.
Raha manana fanontaniana na tolo-kevitra momba ny USPS ianao ary raha Manatitra amin'ny faran'ny herinandro izy ireo dia azafady mba tsara ny mamela hevitra ary koa zarao amin'ny namanao ity lahatsoratra ity.
Tags:tonga alahady ve ny mailaka?, manolotra amin'ny alahady sy alahady ve ny usps, manolotra antsika ve ny usps amin'ny alahady 2021, manolotra ve ny usps amin'ny alahady 2020, fandefasana mailaka ny sabotsy 2020, mailaka laharam-pahamehana Usps, amin'ny firy no natolotra ny mailaka ny sabotsy tao amin'ny faritra misy ahy, amin'ny firy no omen'ny usps
Aiza no ahazoan'ny banky vola hampindrana amin'ny mpampindrana?
Fomba fanodinana entana toy ny can, tavoahangy, metaly, elektronika ary fiara hahazoana vola
Home Depot akaikiko & varotra tsara indrindra ary fotoana hiantsenana ao amin'ny Home Depot
Victoria Akpan dia nahazo mari-pahaizana licence momba ny Arts Communication avy amin'ny University of Uyo, Uyo, Nizeria. Izy dia mpamorona atiny mahaleo tena sy mpamorona atiny bilaogy.
hanafoana ny valin-
Albums Rap tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra ary Album Kanye West 13 tsara indrindra
Fanasana tarehy tsara indrindra ho an'ny lehilahy manana toetra sy fiasa mahagaga
Toeram-pisakafoanana tsara indrindra any Roma ho an'ny sakafo, Pizza ary sakafo legioma hafa
Hazo mangatsiaka indrindra eran'izao tontolo izao sy ny endri-javatra mahavariana
Tranomboky tsara indrindra eran'izao tontolo izao sy aiza no hahitana azy ireo
Enga anie 2021
Enga anie 2019
Theme avy MyThemeShop.	Miverina any ambony ↑
%d ny mpamaham-bolongana toy izao: